Iimveliso zethu zijolise kwizixhobo zeplastikhi, izixhobo zehardware, ifanitshala yePlastiki yeLed Driver enclosedaccessories, i-anti-tip funiture, i-anchor yefanitshala, iinyawo zokulinganisa ezihlengahlengisiweyo, isikhuseli sembombo seplastikhi, uLawulo olukude, iLampshade, intambo yekhebula, isibiyeli, Ifanitshala / Izibane / uqhagamshelo ngombane kunye nokubopha izincedisi, njl Ngoku sikhonza abathengi kwihlabathi liphela. Inkampani inemishini emininzi yokubumba yenaliti kunye nezixhobo zokuvelisa iiplastikhi, ezinokubonelela ngeenkonzo ezihlanganisiweyo zoyilo kunye nokuvelisa, ukubumba ngenaliti, ukuqhubekeka kunye nokuhlangana.Sikwamkela i-OEM / ODEM kunye nepakeji. Siza kukubonelela ngexabiso kunye nenkonzo.
Inkampani ikhuthaza umoya weshishini "wobungcali, osebenzayo, osebenzayo kunye nokuyila", unendlela elungileyo yangaphakathi, indawo yokusebenza egqwesileyo kunye nenkuthazo elungileyo, kwaye utsala iqela elikumgangatho ophezulu, kwinqanaba eliphezulu kunye neetalente ezifanelekileyo. Ukuthengisa kunye neenkqubo zenethiwekhi zekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphantsi kwesiseko esithi "Abantu-based, Ukusinda ngoBulunga, uPhuculo ngeKhredithi", inkampani yethu yenza inkqubela phambili kwaye inikezela ngeemveliso kunye neenkonzo ezilungileyo kuwe nangaliphi na ixesha. ikamva eliqaqambileyo!